Miisaaniyada Degaanka Somalida Ethiopia ee sanadka 2011/12 ayaa noqonaysa 3.2 Bilyan oo Birr – Rasaasa News
Miisaaniyada Degaanka Somalida Ethiopia ee sanadka 2011/12 ayaa noqonaysa 3.2 Bilyan oo Birr
Jul 26, 2011 Miisaaniyada Degaanka Somalida Ethiopia ee sanadka 2011/12 ayaa noqonaysa 3.2 Bilyan oo Birr
Jijiga, July 25, 2011 [ras] – Miisaaniyada sanadka 2011/12 ee Degaanka Somalida Ethiopia oo ah aduun dhan 3.2 bilyan oo Birr, ayey shalay anixiyeen gudiga fulinta [golaha wasiirada] dawlada degaanka Somalida Ethiopia!
Miisaaniyada degaanka Somalida ee sanadkan ayaa koradhay 50%, marka la barbar dhigo miisaaniyada sanadkii tagay oo ku jirta galka kaydka dawlada.
Dawlada degaanka Somalida Ethiopia wali si rasmi ah uma soo bandhigin 3.2 milyan Birr ee miisaaniyada sanakan meesha ay ka imanayso iyo waliba sida loo isticmaalayo.
Miisaaniyada dawlada wadaaga ah ee Ethiopia ee sanadka 2011/12, ayaa ah 117.8 bilyan, taas oo 15 milyan oo ka mid ah ay dawlada dhexe ku kabayso miisaaniyada degaanada.
In kasta oo ay koradhay labanlaab miisaaniyada sanadkan ee degaanka Somalida Ethiopia, hadana waxaa jira isbadalo badan oo ka jira degaanka Somalida Ethiopia.
-Waxaa jira Sixir barar xoog leh oo maalin walba ay kor u kacayaan qiimayaasha badeecooyinku, arintaas oo qiima tiraysa miisaaniyada.
-Waxaa la sameeyey 15 degmo oo cusub, oo ka dhigaya tirada degmooyinka degaanka Somalida 67 degmo, meesha ay sanadkii hore ka ahaayeen 52 degmo.
-Waxaa iyana jira afar magaalo oo maamulo ka madax banaan gabalada ay ka midka yihiin oo la sameeyey, kuwaas oo lagu talo galay in ay helaan miisaaniyada u gooni ah si ay u sameeyaan kobac magaalonimo oo deg deg ah, sida la sheegay.
Wali ma aanaan helin faahfaahin ku saabsan farsamaynta miisaaniyada degaanka, mana aha in aanu ka hor dhacno inta ka horaysa faahfaahinta dawlada degaanka Somalida.
Waxaase jirta in Degaanka Somalida Ethiopia, uu leeyahay xubno baarlamaan oo laga soo doorto degmooyinka. Kuwaas oo ah golaha wakiilada ee shacabka, waxayna masuul ka yihiin awooda sharci dajinta iyo ansixinta go,aamada dawlada.
Sida aanu warka ku helay miisaaniyada degaanka Somalida waxaa ansixiyey golaha wasiirada, arintaas oo haday run tahay ayna miisaaniyada degaanku micna samaynaynin.
Maamul Gabaleed ay Kenya Taageerto Ethiopia Colaad ma Galin Karaa?